मन्त्री बनेका ४ सांसदलाई माओवादी केन्द्रले गर्‍यो कारबाही
काठमाडौँ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय लिन नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको छ । माओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई कारबाही गरेको सूचना संसद सचिवालयलाई दिएका छन् ।
योगेश भट्टराईलाई सुर्य थापाको कडा प्रश्नः बिगार्न बाँकी चाहिँ के नै राख्नुभयो ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले नेता योगेश भट्टराईलाई प्रश्नै प्रश्न गरेका छन् ।
एमाले नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक सकियो
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको माधव समुहको स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपक्षीय रुपमा पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेपछि माधव समुहले पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको हो ।
निर्वाचन आयोगद्वारा ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा खारेज
नेपाल कम्युिनष्ट पार्टी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युिनष्ट पार्टी (ने क पा) खारेज गरेको छ । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिने निर्णय गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि आयोगले पनि (ने क पा) खारेज गरेको हो ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी अलग–अलग भएर जाने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिता ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी अलग–अलग भएर जाने भएका छन् । सोमबार साँझ पेरिसडाँडामा बसेको प्रचण्ड–नेपाल स्थायी समितिको बैठकले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र अलग अलग भएर जाने निर्णय गरेको हो ।
भैसेपाटीमा विष्णु पौडेल र वामदेवको भेट
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेले र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच भेट भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेता पौडेल गौतमको निवास भैसेपाटी पुगेका हुन् ।
गोकुलको प्रचण्ड–माधवप्रति व्यंगहरुको झटारोः अस्ति त अग्रगमन भो भनेर लड्डु बाँड्या थे !
काठमाडौँ । साविक नेकपाको ओली समूहका नेता गोकुल बाँस्कोटाले प्रचण्ड–नेपाल समूहप्रति कटाक्ष गरेका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्,‘आफै पुनस्थापनाको माग गरे अनि बहिष्कार,त्यो पनि सदन चल्न हुँदैन भनेर कटाक्ष गरेका छन् ।’
प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक ३ बजे बस्ने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक केही बेर पर सरेको छ । यसअघि बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको भए पनि बैठक ३ बजेका लागि सरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड–नेपाल समूह आकस्मिक छलफलमा जुटे
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिने फैसला गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह आकस्मिक छलफलमा जुटेका छन् ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दल कसको भन्ने विवादको निर्णय सर्वोच्च अदालतले आइतबार सुनाउने भएको छ ।